अ’ल्सरको स’मस्याले ग्रस्त हुनुहु’न्छ ? पिउनुहो’स् मात्र यो एक ड्रिं’क्स, मिल्छ राह’त – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/जिबनशैली/अ’ल्सरको स’मस्याले ग्रस्त हुनुहु’न्छ ? पिउनुहो’स् मात्र यो एक ड्रिं’क्स, मिल्छ राह’त
महिनावरीमा हुने दुखाईबाट छुटकारा: बेसार भएको दुध पिउदा महिनावरीको क्रममा हुने दुखाई कम हुन्छ । बेसार र दुधमा रगत पातलो बनाउने गुण हुन्छ । साथै यसमा श’रीरको विषाक्त पदार्थ प्राकृतिक तरिकाले हटाउन सक्ने गुण हुन्छ । महिनावारीका समयमा र’क्तप्रवाह राम्रोसँग भयो भने पे’ट दुख्न कम हुन्छ। त्यसैले महिनावारीका समयमा हुने दु’खाई कम गर्नका लागि दूध वेसारको सेवन निकै लाभदायिक मानिने गरिन्छ । दूध बेसारका अन्य फाइदा: